Salai Tin Maung Oo | Just Another WordPress Blog
We are uploading the biography of our legendary hero and student martyr Salai Tin Maung Oo,aHigh Flying Hornbill (Vansangva).
ဆလိုင်း တင်မောင်ဦးဟာ ချင်းလူမျိုး တခုတည်းအတွက် ပေးဆပ်သူမဟုတ်ဘဲ မြန်မာပြည်တခုလုံးအတွက်လက်တွေ့ပြပေးဆပ်သွားသူပါ။ တကယ်တော့မြန်မာပြည်တခုလုံးရဲ့အာဏာရှင်တော်လှန်ရေးမှာသူ့လောက် ယုံကြည်ခြင်းရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်နိဂုဏ်းချုပ်အမိန်အာဏာရှင်တွေအားကြိုးစဉ်ပေါာကနေတန်ပြန်အမိန့်ပေးနိုင်ခဲ့သူတဉီးတည်းရယ်ပါ။ ကျွန်တော့ရဲ့အတွေးထဲမှာတခါတခါပေါာလာတတ်တာကသူ့ကိုဘာ့ကြောင့်တနိုင်လုံးအနေနဲ့မှတ်မှတ်ရရမဂုဏ်ပြုရတာလဲဧပါ့။
စဉ်ဆက်မပြတ်ဂုဏ်ပြုသွားမှာပါ။ Salai Thang Ning Kee, Canada
Thank you brother. I study in political sciences .
ဆလိုင်းကိုတင်မောင်ဦးရဲ့အကြောင်းကို ၂၀၁၀ ခုနှစ်မှာ ထုတ်ဝေခဲ့တဲ့ Chin Forum ၁၀ နှစ်ပြည့် အထိမ်းအမှတ် Magazine မှာ ဆလိုင်းကိပ်ရဲ့ “အမြင့်ပျံ အောက်ချင်းငှက် ဆလိုင်းတင်မောင်ဦး” ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်နဲ့ ပဲ စသိခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။ တစ်လောက ရန်ကုန်က စာအုပ်ဆိုင်မှာ “မေ့လျော့နေသော အာရှတိုက် သူရဲကောင်း ဆလိုင်းတင်မောင်ဦး” စာအုပ်ကို ၀ယ်ယူ ဖတ်ရှုခွင့် ရခဲ့ပါတယ်။ ဆလိုင်းတင်မောင်ဦးရဲ့ စိတ်ဓါတ်နဲ့ အသက်တာဟာ အင်မတန်ကို လေးစား စံပြုထိုက်ပါတယ်။ ကြေကွဲစရာ လဲ ကောင်းလှပါတယ်။
ဆလိုင်းကိုတင်မောင်ဦးရဲ့အကြောင်းကို ကျတော်တို့(၈) တန်း (၉) တန်း အရွယ်ကတည်းက ဖတ်ရှုနိုင်ခဲ့ရင် သိပ်ကောင်း မှာပဲလို့တစ်ယောက်တည်း တွေးမိတယ်။
ဘာပဲ ပြောပြော၊ ဆလိုင်းကိုတင်မောင်ဦးရဲ့ အကြောင်းကို မိတ်ဆက်ပေးကြတဲ့ ဆလိုင်းကိပ်နဲ့ဦးအောင်ထူးတို့အပေါ်မှာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ဆလိုင်းကိုတင်မောင်ဦးရဲ့ ကျန်ရစ်သူ မိသားစုတွေအတွက်လည်း ဆုတောင်းပေးပါတယ်၊ “သူတို့ ရဲ့ ကြေကွဲတဲ့ နှလုံး သားတွေကို ဂုဏ်ယူမှုနဲ့အားတင်းပြီး ဖြေသိမ့်နိုင်ကြပါစေလို့ …”
A Ruang (ချင်းပြည်နယ်)။
Min Myo Naing